"Ninkii dilay walaalkay ayaan la saaxiibay" - BBC News Somali
Xigashada Sawirka, Katya Cengel
Denis Taylor iyo Ronald Fields
Denis iyo qoyskeeda ayaa diyaariyay qoraal qiraal ah oo ay ku sheegayaan in ay cafiyeen Fields maadaamaa uu aad isu badalay, heleyna dhaqancelin. Balse ma ahan wax iska yimid ee waa go'aan ka dhashay muddo dheer oo ay dadaal samaysay gabadhan, ogaatayna xaqiiqooyin badan oo nolosha ah.
Sawir xusuus ah
"Waan ognahay in dambiga Fields loo arko in uu yahay mid uu ka galay dowladda, balse waa anaga dadka maalin kasta dareemayay dhibaatada ay leedahay in qof noloshaada ka mid ahaa la dilo, in uu intan sii xirnaadana ma ahan wax aan anaga taageerayno" ayaa lagu yiri warqad ay garsoorka u qoreen qoyska Denis.
Wuxuuna go'aan ku gaaray in uu dhoco, waana xiligaas xiliga uu dilka dhacayo.
Denis iyadu waxa ay doonaysay in Fields lagu xukumo xabsi daa'in aanan lahayn wax cafis ah.
Waxa ay kadib go'aansatay in ay la xiriirto Fields, iyada oo arrintaas kala tashatay asxaabteeda oo ku waafaqay fikirkeeda. Kadib sanadkii 2005-tii ayay warqad u dirtay Fileds oo ay kaga codsanayso in ay soo booqato.
Fields waa 56 jir, wuxuuna marayaa xili uu cimrigiisa ka faa'iidaysan karo haddii lasoo siidaayo.
Waxayna ahayd maalintii koowaad oo wajigiisa farxad laga dareemo mudadaas intaas la'eg, wuxuuna hadda dareemayaa naacowda xoriyadda.
Is faham la'aanta u dhexeysa dadka naafada ah iyo dhakhaatiirta